कुन बार जन्मिएको मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस् « Postpati – News For All
भनिन्छ भाग्य हिड्ने बाटो मात्र हो | तर त्यो भाग्य अर्थात् हिड्ने बाटोको निर्धारणमा जन्मेको बार र महिनाले पनि ठुलो महत्व राख्दछ । आज हामी बार अनुसार व्यक्तिको स्वभाव र भाग्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं । जम्मा सात वटा बारहरु हुन्छन् आइतबारदेखि शनिबारसम्म यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर कुन बार जन्मेको मानिसको स्वभाव, भाग्य र भविष्य कस्तो हुन्छ ? यो विषयमा थाहा नहुन पनि सक्छ । हरेक बारमा एक एक वटा ग्रहको प्रभाव रहन्छ । र सोहि ग्रह अनुसार नै त्यो बार जन्मने व्यक्तिको जीवनमा प्रभाव रहन्छ ।
अब कुरा गरौँ कुन बार जन्मने व्यक्तिको स्वभाव, भाग्य र भविष्य कस्तो रहन्छ ?
आइतबार : आइतबार अर्थात् रविबार । आइतबार जन्मिने मान्छे ओझ, तेज र प्रकाशले भरिएका हुन्छन् । यिनीहरु सुरो प्रवृतिका हुन्छन् अर्थात् आत्मबल बलियो हुन्छ । उनीहरु जोखिम मोलेर काम गर्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरुको स्वास्थ्यमा भने केहि समस्याहरु आउँछ । यदि स्वास्थ्यमा समस्या आइराखेमा नियमित रुपमा सूर्यलाई जल चढाउनुपर्छ या तामाको औंठी धारण गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ । आइतबार जन्मने व्यक्तिलाई सरकारी काम अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ | यिनीहरु उर्जावान कार्य गर्न रुचाउने खालका हुन्छन् । यिनीहरु डाक्टरसँग सम्बन्धि पेसा वा औषधिसम्बन्धि पेसा पनि यी बार जन्मने व्यक्तिलाई अत्यन्तै शुभ मानिन्छ । यिनीहरुले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोमबार : सोम अर्थात् चन्द्रमा । सोमबार चन्द्रमाको बार हो । चन्द्रमा मनको कारक, माताको कारक, जलको कारक हो । यो बार जन्मने व्यक्तिको मनोबल उच्च हुन्छ | सोमबार जन्मने जातक आमाको लागि भाग्यशाली हुन्छ । यिनीहरु मातृसुखका कारक हुन् । सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुले डेरी अर्थात् सेतो तरल पदार्थ सम्बन्धि कामहरु गर्दा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई लेखन साहित्यमा पनि रुची हुने भएकाले सोसम्बन्धी काम गर्दा पनि शुभ हुन्छ । यिनीहरु भावुक खालका हुन्छन् । यिनीहरु धैर्यवान् पनि हुन्छन् | सोमबार जन्मिएका मान्छेले पानी र दुध वा दुधबाट बनेका परिकारहरु बेलाबेलामा दान गरेमा राम्रो हुन्छ । आमासँगको सम्बन्ध भुलेर पनि बिगार्नु हुँदैन । शिवलिङ्गमा पानी अर्थात् दुध चढाउने गर्नुभयो भने पनि सोमबार जन्मने व्यक्तिको लागि अत्यन्तै शुभ हुन्छ । यिनीहरुलाई खाद्यान्नको व्यवसाय पनि फाप्छ, वनस्पतिको व्यवसाय पनि फाप्छ । सोमबार जन्मिएका व्यक्तिहरुलाई चाँदी धारण गर्नु पनि शुभ मानिन्छ ।
मंगलबार : मंगलबार मंगल ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यो बार जन्मने व्यक्तिमा आँट, हिम्मत र पराक्रम प्रशस्त हुन्छ | यिनीहरु जोखिम मोलेरै काम गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् | नेतृत्व बहन गर्ने खालको क्षमता यिनीहरुमा हुन्छ | यिनीहरुलाई शैन्य, पुलिस जस्ता कामहरु शुभ मानिन्छ भने हातहतियार सम्बन्धि कामहरु पनि अत्यन्तै फाप्छ | जग्गा जमिन बेचबिखन काम पनि पनि यो बार जन्मनेलाई राम्रो हुन्छ । मंगलबार जन्मने व्यक्तिहरुले दाजुभाइसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन | यदि दाजुभाइसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने मंगल ग्रह बिग्रिछ र तपाई समस्यामा पर्नुहुन्छ । यो बार जन्मनेहरुले मंगलबारको ब्रत बस्नु शुभ हुन्छ । मंगलबारे हनुमान र गणेशको पुजा, प्रार्थना गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
बुधबार : बुधबार बुध ग्रहको प्रभाव रहन्छ | यो बार जन्मने व्यक्ति चलाख, दिमाग चल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । यिनीहरू व्यापारिक प्रवृत्तिका हुन्छन् । यिनीहरु बुद्दिमान हुन्छन् । कुनैपनि प्रकृतिका व्यापारमा यिनीहरु सफल हुन्छन् । यदि बुध ग्रह बिग्रिएको छ भने चाहिँ यिनीहरु अलिकति सुस्त मनस्थितिका हुन्छन् । बुधबार जन्मेका मानिसले घरका महिलालाई भुलेर पनि अपमान गर्नुहुँदैन ।
बिहिबार : विहिबार वृहस्पति ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यो बारलाई गुरुबार पनि मानिन्छ । त्यसैले यो बार जन्मने व्यक्तिहरु बौद्दिक प्रकृतिका हुन्छन् । यिनीहरु सोचेर मात्र बोल्छन् । यिनीहरु धार्मिक प्रवृत्तिका हुन्छन् । विहिबारब जन्मिएका महिलाले भुलेर पनि श्रीमानसँग सम्बन्ध बिगर्नु हुँदैन । त्यसैगरी पुत्रसँग पनि सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन | यसो गर्दा गुरुग्रह बिग्रन्छ । यिनीहरुले आफ्नो गुरुलाई सम्मान दिएमा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । पहेलो बस्त्र दान दिनु शुभ हुन्छ ।
शुक्रबार : शुक्रबार शुक्र ग्रहको बार हो । यो बार शुक्र ग्रहको प्रभाव रहन्छ । शुक्र ग्रह सुखको कारक हो । शुक्रबार जन्मने व्यक्तिले महिलाको अपमान गर्नु हुँदैन । यिनीहरुले महिलाको अपमान गरेमा जीवनमा कहिल्यै सुख मिल्दैन । यिनीहरुलाई मनोरन्जनात्मक कामहरु, लुगाफाटामा बुटीकका कामहरु, ब्युटीपार्लरका काम, कस्मेटिकका कामहरु, मिडिया लाइन, कलाकारितातिर लाग्नु शुभ मानिन्छ । यिनीहरु रोमान्टिक स्वभावका हुन्छन् ।
शनिबार : शनिबार शनिदेवको बार हो । यसलाई कालोबार पनि मानिन्छ । शनिबार जन्मेका व्यक्तिले भुलेर पनि झुट बोल्ने र फट्याइँ गर्ने गर्नुहुँदैन । यदि तपाई शनिबार जन्मेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तामसी र राजसी भोजन नगरेकै राम्रो । यिनीहरुलाई फलामसम्बन्धि काम अत्यधिक फाप्छ । रोडा, बालुवा, इट्टासम्बन्धि काम पनि फाप्छ । हार्डवेयर, रंगरोगनसम्बन्धि व्यवसाय पनि यिनीहरुलाई शुभ हुन्छ । यिनीहरुको अलि ढिला भाग्य खुल्छ ३२, ३६ र ४२ वर्षको उमेरमा यिनीहरुको भाग्य उदय हुन्छ ।
यिनीहरुले आफ्ना घरका नोकर या कुनै गरिबलाई भुलेर पनि दुख दिनु हुँदैन यसो गर्दा शनि ग्रह बिग्रन्छ र जीवनमा समस्यामा आइपर्छ ।
२७ असार २०७७, शनिबार को दिन प्रकाशित